ရောက်တတ်ရာရာ | Freedom News Group
Posts from the ‘ရောက်တတ်ရာရာ’ Category
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Aug 1
1 Comment	မိုးသည်းထန် စွာ ရွာသွန်း မှု ကြောင့် ကရင် ပြည် နယ် တစ်ခု တည်း မှာ ပင် သေဆုံး သူ နှစ်ဆယ် ကျော် ရှိ
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာ သွန်း မှု ကြောင့် ရေကြီး ၊ မြေပြို ခြင်း ၊ ကမ်း ပါး ပြို ခြင်း ၊
တောင် ပြို ခြင်း များ ဖြစ် ပွား ရာ မြန်မာ ပြည် အရှေ့ ခြမ်း ကရင် ပြည် နယ် Read more
1 Comment	သတင်းကောင်း
by ကို သုကာ
JL Tkg : ဟေ့အကောင် မင်းမျက်နှာက ပြည်တည်တည်နဲ့ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ လဒကြီး
ခွေးသေကောင်ပုတ် ခွထိုင်နေသလိုပဲ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Nov 12
1 Comment	မြန်မာ ပြည်မှာ အပြောင်းအလဲ တွေ ဖြစ်နေပြီ
ကလန်သံဗျင် ရဲ့ ချစ်စွာသော စာဖတ် ပရိသတ် များ မင်္ဂလာ အပေါင်း နဲ့ခညောင်း ကြပါစေ။
ကလန်သံဗျင် တစ်ယောက် ပရိသတ် ရှေ့ မှောက် သို့ရောက် ရှိ လို့ လာ ပြန်ပါပြီ။ ပရိသတ်
နဲ့ကွဲကွာ နေတဲ့ ကာလ တစ်လျှောက် မှာ ကလန် သံဗျင် တစ်ယောက် အီးယူ နိုင်ငံ ကြီးတွေ Read more
1 Comment	အာဏာရှင် များ ကို ဖယ်ရှားသည့် ဖြစ်စဉ် များတွင် အမေရိကန် ထိရောက်စွာကူမည်
This is the time for action.Let us do that. Let us do it. (Speech of Hilary Clinton
On Monday at Geneva Human Right Council)
ဟီလာရီ ကလင်တန် —–မိမိ၏ ပြည်သူအား ဖိနှိပ် ညှင်းပန်း ရက်စက် သည့် အစိုးရ သည် အုပ်ချုပ်မှု အခွင့်အာဏာဆုံးရှုံးမည် ကို နားလည် သဘောပေါက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ—သိုင်းကား က လွဲ လို့ ကျန်တာ ဘာပြောပြော သဘောမပေါက်ဘူး ;)
ဟီလာရီ ကလင်တန် —–ပြည်သူတွေ ရဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ တောင်းဆိုမှု တွေ ကို လေးစားလိုက်နာရမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ— ပြည်သူတွေ က ပါရမီ ဖြည့်ဖက် မဟုတ်ဘူး ၊ အမကြိူင်က သာ ပါရီဖြည့်ဖက်
ဒါကြောင့် အမကြိုင် ဆန္ဒပဲ လိုက် ပါမယ်။ ငယ်ငယ် တည်း က ပြည်သူ့ဆန္ဒ
ဆိုရင် သွေးဆေး ပုလင်း တောင် ကြည့်လို့ ရခဲ့တာ မဟုတ် ဘူး ။ သဘောပေါက်… :)
ဟီလာရီ ကလင်တန် –—-လူ့ အခွင့် အရေး တွေ ကို လေးစား လိုက်နာရမယ်
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ—လာပြန်ပြီ …အပ် ကြောင်းထပ်နေပြီ…..လူအခွင့်အရေး တွေ လေးစားလိုက်
နာရမယ် ဟုတ်လား ။ဒါဆိုရင် စပယ်ယာတွေ ၊ လက်မှတ် စစ်တွေ အလုပ်ပြုတ် သွားမယ်။ အလုပ်ပြုတ် ရင်
တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်မယ်။ ကြီးဒေါ် တို့က စပယ်ယာတွေ ကို ရော တစ်နိုင်ငံလုံး တင်ကျွေးထား မယ်
ဆိုရင် ပြော။ လူ့ အခွင့် အရေး လိုက်နာမယ်။ ဘယ်နှယ့်လဲ၊ Sound Good ???? ;)
(ဤနေ ရာတွင် Inglorious Bastard ဇာတ်ကားမှ ဘရက်ပစ်လေသံဖြင့်ပြောသည် )
ဟီလာရီ ကလင်တန် —– This is time for action
ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီးသန်းရွှေ —This Time for Action တွေ This time For Drama တွေ This time for Africa တွေ ၀ါကာ ၀ါကာ လာလုပ်မနေနဲ့Myanmar Time က ကတုံး တောင် ငါးမှုလောက် ဖမ်း ပြီး ကပ်ထားတာ တွေ့ လား :)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Feb 19
“ငါ… ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ လုပ်ဖို့ တို့ …ရာအိမ်ခေါင်း လုပ်ဖို့ တို့ …….ဆယ်အိမ် ခေါင်း လုပ်ဖို့ 
တို့ မွေးလာတာမဟုတ်ဘူး ” ဒီပြောစကားလေး ကို တော့ နေပြည်တော် က ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခု ကအကြီးတန်း
အရာရှိ တစ်ဦးရဲ့ ဖေ့ဘွတ် စာမျက် နှာ မှာ တင်ထားတာပါ။ ဒီပြောစကား ရဲ့အောက်မှာ
လည်း မှတ်ချက်တွေ သဘောထား တွေ ပေးထားတာ အတော် ပွဲ စည် နေပါတယ်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Feb 9
4 Comments	ဖေ့ဘွတ် မှာ ပြောကြတာတွေ
အေ့. (လေချင်တက်ပြီး အရက်နာ ကျကာ ပျို့ သော အသံဖြင့်) ဟေ့..ဟေ့ ကောင်လွဏ်းဆွေရေ ……….မင်းကတော့ ငါ့သိမှာ မဟုတ် ဘူးနဲ့တူပါတယ်။ဒါပေမယ့် အရေးမကြီးဘူး။အေ့….အေ့ (ခဏ လေချင်တက်သည်) ဒါပေမယ့် မင်း ငါ အေ့ ငါဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိအောင်တော့ ပြောဖို့ လိုတယ်။
ငါက တခြား လူတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ သာမန် ဆူရှီ လိပ် ပြီး မိန်းမ နဲ့ နှပ်နေတာ ပါ။ ကြုံတုန်းလေး
ကပ်ကြွားရရင် ငါက ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အိုမာ ဆူလေမန် ရဲ့ တပ် နဲ့အတူ ဖက်ဆစ် ဂျပန် ကို ရွပ်ရွပ်
ချွံချွံ တိုက် ခိုက်ခဲ့ တယ်။အေ့ ……အခုလည်း အီဂျစ် တို့တူနီး ရှား တို့ မှာ တော်လှန်ရေး
ဖြစ်တာလည်း ငါလက်ချက်ပဲသူတို့ က ငါ့ ကို ခေါင်းဆောင် ဖို့ သိုးဆောင်း လို ရေးပြီး ဖိတ်တယ်။
ငါ က မဖတ် တတ်တာ ရော ခရက်ဒစ် ခဏခဏ ပျက်တော့ လေယာဉ် ဖိုး လည်း မရှိ တာနဲ့ 
အမေရိကန် မှာ ပဲ ဆူရှိလိပ်ရင်း လေနဲ့ အားပေး ခဲ့တယ်။ …(ဤ နေရာတွင် လေချင်
တစ်ချက် တက် ပြန်သည်) အေ့ …….. Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,292 hits